Nezvedu - Aviva
Aviva yave ichizivikanwa seimwe yevatungamiriri vanogadzira fenicha yekunze muChina kwemakore makumi maviri nemaviri apfuura. Ichi chiitiko chakareba chinopa vese vatengi chivimbo chekuti zvigadzirwa zveAviva ndezvemhando yepamusoro, zvine mutsindo uye zvine mutsigo unoshamisa.
Iine dzinosvika mazana masere emamirimita mita yekugadzira nzvimbo uye vanopfuura vashandi makumi mashanu vanoshanda mufekitori, Aviva yekunze gadheni fenicha muridzi uye inoshanda ndeyayo yega yekugadzira zvivakwa, kuburitsa Yakakwira Mhando, Yese-Yemamiriro ekunze fenicha pane fekitori yakananga mitengo.
Fekitori yedu inozivikanwa nekugadzira aruminiyamu yekudyira maseti, masofa emakona, masofa seti, zvigaro zvetambo, tafura hwaro netafura yepamusoro kune ese ekunze nekunze. Nepane vagadziri vemidziyo yakawanda kwazvo yemubindu pamusika, zvinogona kunetsa kuziva kuti ndiani mugadziri akavimbika anogadzira fenicha yepamusoro yepamusoro kana avo vari kuburitsa fenicha yakachipa isina kuvakwa kuti igare.
Isu tinongoshandisa iyo yakanakisa zvinhu iyo ruoko yakarukwa yakakomberedza poda yakavharwa aruminiyamu mafuremu ayo ekunze fenicha muunganidzwa, nepo tichishandisa yepamusoro-mhando makushoni eiri aruminiyamu-yakarongedzwa chigaro uye sofa muunganidzwa. Izvi zvinokutendera kuti usiye fanicha kunze kwegore rese pasina njodzi yekukuvara kwemamiriro ekunze. Izvi zvinosanganisira kuchengetedzwa kubva kunotonhora mamiriro ekunze, kuve nechokwadi chekuti rattan haina kutsemuka kana kupwanyika, uye kubva kunezuva kuti ive nechokwadi chekuti fanicha haina kupera.
Imba yekunze yepatio yeAviva inovavarira kuendesa kutaridzika kwemaitiro matsva ayo akagadzirwa enharaunda ane hushamwari uye akanakisa zvinhu. Isu tinotenga, tinogadzira uye kuyedza zvese mbishi-mumba kuti tizive zviri mukati mezvigadzirwa zvedu.
Isu tinoshandisa mhizha nevakadzi vane hunyanzvi vane hunyanzvi mukudzora kwemhando yepamusoro. Stringent mhando cheki mapoinzi ari munzvimbo pane yega nhanho yekugadzira kuburikidza nekurongedza, kuve nechokwadi chekuti zvinhu zvako zvinosvika zvakanakisa mamiriro.
Fenicha yekunze yeAviva inouya neyakavimbiswa makore matatu iyo inogutsa vatengi kubva pasirese, kunyanya vatengi vanobva kuUK, USA, Australia, Canada, France, Italy neTurkey. Isu tinosanganawo nezvinodiwa zvepamusoro-soro zvevatengesi vakuru kubva kuAmazon.
Factory Kero: Block B, Yese Flat, 22 Haikou Road, Zhangcha Town, Chancheng Zone, Foshan, Guangdong, China
Runhare: 0086-757-8226 3754